Edere site Tranquillus | Jul 18, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Akaụntụ ọzụzụ onwe onye bụ otu n'ime sistemụ kachasị ọhụrụ ewepụtara dịka akụkụ nke mgbanwe ọzụzụ ọrụ aka 2014, etinyere na 1er A na-eji CPF akwụ ụgwọ maka ọzụzụ na-aga n'ihu maka ndị ọrụ na ndị na-achọ ọrụ n'ihe omume ha. Nkọwa ndị ọzọ na ederede.
Nkọwapụta nke ọzụzụ ọzụzụ onwe onye
Akaụntụ ọzụzụ nke onwe ma ọ bụ CPF bụ usoro iwu nyere. Ọ ga - enyere gị aka irite uru na ikike ọzụzụ. Ya mere ebumnuche ya iji mee ka ikike gị sie ike, na-enwe ọrụ gị ma chekwaa ọrụ ọkachamara gị.
Okwesiri iburu n’uche na onye nwere ezumike nka nwere ike inye ego ya CPF ma obu n’enye amuma ikike ezumike nka ya. O kwesịrị ịdị ka ọrụ afọ ofufo.
Mara na akaụntụ ọzụzụ nke onwe edochila Onye Ọzụzụ Ziri Ezi ma ọ bụ DIF, site na 1er Jenụwarị 2015. Enwere ike ịfefe elekere DIF fọdụrụnụ na-ereghị na CPF.
All ọrụ ndị ka nwere a fọdụrụnụ nke DIF awa nwere oge ruo mgbe December 31, 2020 na-eme ka a nkwupụta na ha ikpe. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike debe ikike ha ma gaa n’ihu ị enjoyụrị ọ withoutụ na enweghị oge ọ bụla. N'ime ọrụ ọhụụ nke CPF, awa DIF ga-agbanye ego na akpaaka ka ọ bụrụ euro.
Ndị na-erite uru na akaụntụ ọzụzụ onwe onye
Ihe ndekọ ọzụzụ onwe onye ezubere maka ndị gafere afọ 16. Smụaka dị afọ 15 nwekwara ike metụta ma ọ bụrụhaala na ha abịanyela aka na ọrụ ọmụmụ.
GỤỌ Ka oge ngafe na-arụ ọrụ
Dị ka ihe ncheta, malite na ụbọchị nke ikwupute ikike ezumike nka. A ga-emechi akaụntụ ọzụzụ onwe gị. Nkwupụta a bara uru maka ndị niile na - edebanye aha, ndị nwere ike ịbụ ndị ọrụ, ndị otu nke ọrụ mmesapụ aka ma ọ bụ ọrụ aka onwe ha, ndị di na nwunye na-emekọ ihe ọnụ ma ọ bụ na-achọ ọrụ.
Ndị ọrụ aka onwe ha nwekwara ike nweta akaụntụ ọzụzụ onwe ha, ebe 1er Jenụwarị 2018. A na-enye CPF ha n’oge izizi nke afọ 2020.
Lelee akaụntụ ọzụzụ onwe gị: otu esi eme ya?
Iji lelee akaụntụ ọzụzụ onwe onye ya, onye na-ejide ya ga-aga na weebụsaịtị nrụọrụ monshoteformation.gouv.fr. O nwere oghere zuru oke nke o nwere ike igosipụta onwe ya ka o tinye aka n’ime ya.
Ọzọkwa, saịtị a na-enye ozi maka ọzụzụ ruru eru maka CPF na ego enyere ya. Onye jidere ga-achọta ihe ọmụma zuru ezu banyere ya, gụnyere kredit euro dị na akaụntụ ya. N’ikpeazụ, ọ ga-enwetara ọrụ ọrụ dijitalụ metụtara isi okwu nka na nka na ọrụ aka.
Akaụntụ ọzụzụ onwe: olee otu esi enweta ego ya?
Mara na onye ọ bụla ji ihe nwere akaụntụ ana-ekwu na euro na enweghị oge na awa, site na 1er Jenụwarị 2019. Ya mere achọrọ akụkọ ntụgharị maka oge enwetara ma ghara iri ya tupu ụbọchị a. Ya mere, a na-eme atụmatụ ọnụahịa na euro 15 kwa elekere.
Ọzọkwa, mmadụ nwere ike ịdebanye aha maka ego na euro na nkeji iri na ise na-esote afọ nnweta. Iji maa atụ, ọ nwere ike ime nke a n'ime ọnwa atọ mbụ nke 2019 maka ọrụ ọ rụrụ na 2018.
Iji akaụntụ ọzụzụ onwe gị
N'agbanyeghị ọnọdụ gị. Ma ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-achọ ọrụ, ị na-enweta ikike gị enwetara na euro. Naanị ị nwere ike ịrịọ maka ịchịkọta ha, na nke a, dabere na mkpa ọzụzụ gị dị. N'ezie, enwere ike iji ikike izizi ndị a were nkwenye nkwenye nke onye na-ejide ya.
Banyere ndị ọrụ ọkachasị, ị nwere ikike ọ bụla ịghara iji akwụmụgwọ gị na euro. Ọ bụghị ọrụ ọjọọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ n’inwere otu n’ime ọzụzụ ị na-enweta n’okpuru CPF. Na na ọzụzụ a na-ewere ọnọdụ n’oge ọrụ gị. A ga-enyerịrị gị ikike n ’onye were gị n'ọrụ.
A ga-eziga arịrịọ ahụ ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 60 tupu ụbọchị mmalite nke ọzụzụ ahụ. Ọ bụrụ na oge nke nnọkọ ahụ gafere ọnwa 6, a ga-ahụrịrị oge kachasị opekata mpe nke ụbọchị 120. Onye were ya n’ọrụ were ụbọchị 30 were mụọ ọnọdụ a ma sorokwa rịọ onye ọrụ ya. Achọghị ikike a pụrụ iche maka ọzụzụ na mpụga oge ọrụ.
Maka ndị na-achọ ọrụ
Ndị na-achọ ọrụ na-abanyekwa na akaụntụ ọzụzụ onwe ha. Ha nwere naanị ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ọrụ Pôle. Enwere ike kwado ọzụzụ ha site na mpaghara, Agefiph ma ọ bụ Njikọ maka njikwa ego maka njikọta nke ndị nwere nkwarụ, ma ọ bụ ọbụna Pôle n'ọrụ. A ga-atụle akaụntụ onye na-achọ ọrụ dị ka usoro ọzụzụ a rụrụ. Agbanyeghị, ego ahụ agaghị agabiga ikike ndị edebanyere na CPF ya.
Maka ndị ọrụ ọha
Ndị ọrụ gọọmentị ga-etinye akwụkwọ maka ọzụzụ pụrụ iche. Ma ọ bụ n'oge ma ọ bụ na mpụga oge ọrụ nkịtị. A na-anakwere arịrịọ ọ bụla dị ka ogologo oge ọ bụla etolite ọnọdụ edobere ma onye were ya n'ọrụ nwere ego dị mkpa. Na mgbakwunye, onye na-eme arịrịọ na-arịọ arịrịọ a ga-enwe ohere irite uru na nkwado ndị ahaziri iche iji nyere ya aka ịzụlite na imezu ebumnuche ọkachamara ya.
Usoro nkuzi ruru eru maka CPF
Enwere ụdị ọzụzụ dị iche iche ruru eru maka akaụntụ onye nkuzi. Nyochaa amamịghe ahụ, ihe achọrọ iji mee ka amata ahụmịhe enwetara edepụtara na atọ° nke ederede L.6313-1, na nkwadebe nke ule usoro iwu nke Highway Code na ule bara uru nke ikike B na nke nke ugbo ala bu akụkụ ya.
Enwekwara usoro mmuta enyere ndi okike ahia na ndi na ewe ha dika inye ha ọzụzụ na mba ofesi n’okpuru akwukwo nke L. 6323-6 nke Usoro oru.
Akaụntụ Ọzụzụ nkeonwe (CPF) July 17th, 2020Tranquillus
gara agaMmelite na Ntughachi ma ọ bụ nkwalite ọrụ ịmụ ihe (Pro-A).
-esonụDevelopmentnye Ọzụzụ Ọmụmụ Nkwado Ọkachamara